अमेरिकामा दुई नेपाली युवाले गरे आत्महत्या | EuropeNepal.Net
00Europe Nepal Sunday, November 30, 2014
Two Nepali youth to suicide in the United States
दुई बर्षअघि लाखौं रुपैयाँ दलाललाई बुझाउँदै अमेरिका प्रवेश गरेका एक नेपालीले न्यूयोर्कमा आत्महत्या गरेका छन्। मेक्सिको हुँदै दुई अमेरिका छिरेका दाङ तुलसीपुरका २६ बर्षिय मोहन वलीले न्यूयोर्कको व्यस्त मानिने कुइन्स रिजवडस्थित घरको तेस्रो तल्लाबाट हामफालेर आत्महत्या गरेका हुन्। उनी केही समय अमेरिकाको दक्षिणी राज्य टेक्सासमा बसेका थिए ।
Two years ago explaining the United States have entered into millions of rupees to brokers andaNepali New York have committed suicide. Mexico and the US asylum Dang Buddi two busiest kuinsa rijavadasthita 26 aged Mohan Oli York, who had to jump on the third floor. He sat for some time, the southern United States, Texas
केही महिना अघिमात्र न्यूयोर्क पुगेका वली आफू बस्ने घरको तेस्रो तलाबाट हामफालेका थिए। स्थानीय नेपाली महिला इन्दिरा घर्तीमगरले उनलाई आश्रय दिएकी थिइन्। डिप्रेसनका बिरामी वलीले आत्महत्या गर्नुको कारण खुल्न सकेको छैन। नेपालमा उनको पत्नी र तीन बर्षिया एक छोरी रहेको बुझिएको छ। दुई साताअघिमात्र अमेरिकाको पश्चिमी राज्य क्यालिफोर्नियामा अर्का एक नेपाली युवाले समुद्र माथिको पुलबाट हामफालेर आत्महत्या गरेका थिए।
सानफ्रान्सिस्कोस्थित गोल्डेनगेट पुलबाट फाल हालेर काठमाडौंका क्षितिज श्रेष्ठले आत्महत्या गरेका थिए। टेक्ससमा बस्दै आएका श्रेष्ठ सानफ्रान्सिस्को विमानस्थल ओर्लेर सिधै उक्त पुलमा पुगेर फाल हालेका थिए। उनको शव एकसातापछिमात्र ३० माइल टाढा कन्ट्रीकोस्टा भन्ने ठाउँमा फेला परेको थियो।
समुद्रमा हामफाल्नुअघि उनले पुलमा छाडेको झोला र त्यसभित्र रहेको पासपोर्ट, ल्यापटपका आधारमा सनाखत भएको थियो।
EuropeNepal.Net: अमेरिकामा दुई नेपाली युवाले गरे आत्महत्या